Claritin vs. Claritin D: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ကျန်းမာရေး သတင်း ရပ်ရွာ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Claritin vs. Claritin-D: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကပိုကောင်းသည်
ဓာတ်မတည့်သည့်ရာသီရောက်သောအခါဓာတ်မတည့်ဆေးများသည်အသင့်တော်ဆုံးအမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။ အမျိုးမျိုးသောဓာတ်မတည့်သည့်ဆေးများရရှိနိုင်ပါသည်။ ပါးစပ် anti -istamines များသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ Claritin (loratadine) သည်အလွန်ပါးလွှာသောနှာခေါင်း၊ နှာချေခြင်းနှင့်ယားယံသောမျက်စိစသည့်ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်ဆေးမသောက်ရသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ Claritin ကို Claritin-D လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ Loratadine နဲ့ pseudoephedrine ပေါင်းစပ်ပြီးနှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုတိုက်ဖျက်ပေးတယ်။
Antihistamines သင်သည်ဖုန်မှုန့်များသို့မဟုတ်ဝတ်မှုန်များကဲ့သို့သောဓါတ်မတည့်မှုများနှင့်ထိတွေ့ပါက histamine ၏သက်ရောက်မှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ histamine မှရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဤဆေးများသည်ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ သို့သော်၊ Claritin နှင့် Claritin-D တို့တွင်မတူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အသုံးပြုမှုများရှိသည်။
Claritin နှင့် Claritin-D တို့၏အဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
Claritin နှင့် Claritin-D တို့အကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာ Claritin-D မှာ Pseudoephedrine လို့ခေါ်တဲ့ထပ်ဆင့်ပါဝင်တဲ့အရာတစ်ခုပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ Pseudoephedrine သည် decongestant ဖြစ်ပြီးနှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေပြီးအကှဲဖိအားကိုသက်သာစေသည်။ pseudoephedrine သည်စိတ်ကြွဆေးကို decongestant ဖြစ်သောကြောင့် Claritin-D သည် Claritin နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
Claritin ၎င်းသည်ငိုက်မျဉ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောဒုတိယမျိုးဆက် antihistamine ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒုတိယမျိုးဆက် antihistamines သည်ပထမမျိုးဆက် antististines များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငိုက်မျဉ်းနည်းစေသည် Benadryl (diphenhydramine) ။ Claritin တစ် ဦး တည်းနှင့်မတူဘဲ Claritin-D သည် pseudoephedrine ၏လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုပြtroubleနာဖြစ်စေနိုင်သည်။
Claritin (Claritin ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) Claritin-D (What is Claritin-D?) သည်အသက် ၂ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Claritin-D (Claritin-D ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) လူကြီးများနှင့် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံမှန် Claritin ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိပြီး Claritin-D ကို ၁၂ နာရီနှင့် ၂၄ နာရီဖော်စပ်ထားသည်။ ၁၂ နာရီ Claritin-D ကိုနေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်သောက်နိုင်ပြီး ၂၄ နာရီ Claritin-D ကိုအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။
Claritin နှင့် Claritin-D အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း Antihistamine (ဒုတိယမျိုးဆက်) Antihistamine (ဒုတိယမျိုးဆက်) နှင့် decongestant
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Loratadine Loratadine / Pseudoephedrine
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ခံတွင်းဆေးတောင့်
ခံတွင်းရည် ခံတွင်းတက်ဘလက်, တိုးချဲ့ - ဖြန့်ချိ
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? တစ်ချိန်က 10 မီလီဂရမ် - ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်5mg loratadine / 120 mg pseudoephedrine
- 10 mg loratadine / 240 pseudoephedrine တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းရေတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းရေတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်း
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ လူကြီးများနှင့်ကလေးများ2နှစ်နှင့်အထက် လူကြီးများနှင့်ကလေးများ 12 နှစ်နှင့်အထက်
Claritin စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up ကိုနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာရန်!
Claritin နှင့် Claritin-D ကကုသအခြေအနေများ
Cloritin နှင့် Claritin-D တို့တွင်ပါဝင်သော Loratadine သည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာများကိုကုသရန် FDA မှအတည်ပြုခဲ့သည်။ နှာရည်ယိုခြင်းနှင့်နှာချေခြင်းကဲ့သို့သောနှာခေါင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများမှာကြွက်သားများရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သော rhinitis ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာများအုပ်စုကိုစုပေါင်းအဖြစ်လူသိများသည် အဖျားရှိတယ် ။ Loratadine သည်မတည့်ခြင်းမျက်စိသို့မဟုတ်ယားယံခြင်း၊
Claritin-D သည်အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်အတူနှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အကှေ့ဖိအားရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန် ပို၍ သင့်တော်သည်။
Claritin နှင့် Claritin-D နှစ်မျိုးလုံးယားယံခြင်းအပြင်အရေပြားယားယံခြင်းသို့မဟုတ်မှိုများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြေအနေ Claritin Claritin-D
မတည့် rhinitis ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
မတည့်မျက်စိ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အုံမှ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ယားယံခြင်း ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း / Sinus ဖိအား မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ကပိုပြီးထိရောက်သလား။
Claritin နှင့် Claritin-D သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ပါသည် ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည် နှင့်နှစ်ရှည် (တစ်နှစ်ပတ်လုံး) ဓာတ်မတည်။ ပုံမှန်ပျော့ပျောင်းသောဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများရှိသူတစ် ဦး အတွက် Claritin သည်ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်လုံလောက်နိုင်သည်။ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အကှေ့ဖိအားတို့ပါဝင်သောပိုမိုပြင်းထန်သည့်ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများရှိသူတစ် ဦး အတွက် Claritin-D သည်ပိုကောင်းနိုင်သည်။
လက်ရှိတွင် Claritin နှင့် Claritin-D တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာသောလက်တွေ့လေ့လာမှုများမရှိပါ။ ယင်းအစားနှိုင်းယှဉ် ၁၂ နာရီ Claritin-D နှင့် ၂၄ နာရီ Claritin-D တို့မှလေ့လာမှုတစ်ခု။ အဆိုပါဆေးနှစ်မျိုးစလုံးသည်နှာခေါင်းကြောများနှင့်နှာခေါင်းပေါက်ခြင်းကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာထိရောက်သည်။ ၂၄ နာရီ Claritin-D သည်အိပ်မပျော်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး ၁၂ နာရီ Claritin-D နှင့်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Zyrtec-D (cetirizine / pseudoephedrine) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Claritin-D သည်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုထိရောက်မှုနည်းသည်။ တ ဦး တည်းဓာတ်မတည် လေ့လာချက် cetirizine နှင့်အတူနှာချေခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့မှုကို၏သက်သာခွင့်အတော်လေးပိုကောင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Loratadine နှင့် cetirizine လေ့လာမှုအရဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသိသိသာသာကွဲပြားမှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
မည်သည့် OTC Claritin သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ပြောဆိုပါ။ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်အထူးသဖြင့်သင့်တွင်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းရှိပါကမူကွဲတစ်ခုအားအခြားတစ်ခုထက် ပို၍ အကြံပြုလိုပေမည်။
Claritin-Claritin နှင့် D ကို၏လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်
Claritin သည်အများအားဖြင့်ယေဘူယျပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သော OTC အမှတ်တံဆိပ်ဆေးဖြစ်သည်။ ယေဘူယျ loratadine ကိုဆေးဆိုင်များ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်ကုန်စုံဆိုင်များတွင်အများဆုံးတွေ့နိုင်သည်။ Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုသည် Claritin နှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အာမခံမရှိဘဲပျမ်းမျှငွေသားစျေးနှုန်းသည်တက်ဘလက် ၃၀ အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀ နီးပါးရှိသည်။ သင်အသုံးပြုသောဆေးဆိုင်ပေါ် မူတည်၍ ကုန်ကျငွေကိုဒေါ်လာ ၄.၁၀ အထိလျှော့ချနိုင်သည့် SingleCare လျှော့စျေးကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
Claritin-D ကိုယေဘုယျအားဖြင့် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ကြိုက်တယ် အခြားအ OTC antihistamines , Claritin-D ကို၎င်း၏ယေဘုယျပုံစံ, loratadine / pseudoephedrine တွေ့နိုင်ပါသည်။ Claritin-D ၏ပျမ်းမျှလက်လီရောင်းချမှုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၄၅ ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ များစွာသောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်အတွက်ယေဘူယျ Claritin-D အတွက် SingleCare လျှော့စျေးကဒ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးကဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စျေးနှုန်းကို ၁၅ ဒေါ်လာအထိလျော့ချနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး
စံသောက်သုံးသော 10 mg (အရေအတွက် 30) 10 mg loratadine / 240 pseudoephedrine (အရေအတွက် 15)
ပုံမှန် Medicare copay $ 18- $ 44 ဒေါ်လာ ၁၇
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 4- $ 10 $ 15- $ 28
Claritin vs. Claritin-D ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Claritin နှင့် Claritin-D တို့၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အခြားအဖြစ်များသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာနာခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းတို့ပါဝင်သည်။
Claritin-D ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် အိပ်မပျော် သို့မဟုတ် pseudoephedrine ၏လှုံ့ဆော်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်အိပ်ပျော်ခြင်းအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပြtroubleနာ။ Pseudoephedrine သည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုအထူးသဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်သောဆေးပညာသမိုင်းရှိသူများတွင်လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ရှိမည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းကိုမဆိုဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤဆိုးကျိုးများမှာအသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းခြင်း၊ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် * အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိ ဟုတ်တယ် *
အိပ်ငိုက် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ပင်ပန်းနွမ်းနယ် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ပါးစပ်ခြောက် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
အိပ်မပျော် မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် *
စိတ်လှုပ်ရှား မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် *
အာရုံကြော ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
အရေပြားအဖု ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Claritin ), DailyMed ( Claritin: D )
Claritin နှင့် Claritin-D တို့၏ဆေးဝါးဆက်ဆံမှု
Claritin နှင့် Claritin-D နှစ်ခုလုံးတွင် loratadine ပါ ၀ င်သည်။ loratadine ကို amiodarone နှင့်အတူသောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှလုံးခုန်သံကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်။ Torsades de pointes ။
Loratadine သည်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည် CYP3A4 inhibitors ထိုကဲ့သို့သော erythromycin နှင့် ketoconazole အဖြစ်။ ၎င်းဆေးဝါးများကို loratadine ဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ loratadine ပမာဏမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ cimetidine ကို loratadine နှင့်အတူသောက်ခြင်းသည်လည်းအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
Claritin-D ၏ pseudoephedrine ပါဝင်မှုသည် monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)၊ beta blockers နှင့် digoxin ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများနှင့်လည်းထိတွေ့နိုင်သည်။ Pseudoephedrine ဆေးဖြင့်သောက်ခြင်းသည်သွေးကြောစနစ်နှင့်နှလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Claritin Claritin-D
Amiodarone အဆစ်နာရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Azithromycin CYP3A4 inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Cimetidine H2- အဲဒီ receptor ရန် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Isocarboxazid Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Propranolol Beta-adrenergic blockers မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Digoxin နှလုံး glycoside မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Claritin-D vs. Claritin ၏သတိပေးချက်များ
Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ကိုသင်ဤမူးယစ်ဆေးများထဲမှမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဓာတ်မတည့်ပါကသို့မဟုတ်မတည့်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ခဲ့လျှင်မသောက်သင့်ပါ။
Claritin-D ကိုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများရှိသူများအတွက်သတိထားအသုံးပြုသင့်သည်။ ပြင်းထန်သောသွေးပေါင်ချိန် (သွေးတိုးရောဂါ) သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများရှိသူများကိုလည်းဤဆေးကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ Pseudoephedrine တိုးလာသည် သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း အချို့လူများက။
အကယ်၍ သင့်တွင်ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အသည်းပြproblemsနာများရှိပါက Claritin ဆေးများမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။ ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အသည်းချို့ယွင်းမှုသည်ဤဆေးများသောက်နေစဉ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ခြေများပြားစေနိုင်သည်။
Claritin vs. Claritin-D နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Claritin (loratadine) သည်ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများအကန့်အသတ်မရှိ (OTC) antihistamine ဖြစ်သည်။ နှာချေခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ရေစိုနေသောမျက်လုံးများသက်သာစေရန်အတွက်၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ်တက်ဘလက်အဖြစ်ယူလေ့ရှိသည်။ Claritin ကိုလူကြီးများနှင့်ကလေးများတွင် ၂ နှစ်နှင့်အထက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Claritin-D သည် OTC ဆေး antigistamine / decongestant ဖြစ်သည် ပေါင်းစပ်မူးယစ်ဆေး ။ ၎င်းတွင် loratadine နှင့် pseudoephedrine ပါ ၀ င်သည်။ Claritin-D သည်ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အကှေ့ဖိအားအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။ ၎င်းကိုလူကြီးများနှင့်ကလေးများအား ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Claritin နှင့် Claritin-D အတူတူလား?
Claritin နှင့် Claritin-D နှစ်ခုလုံးတွင် loratadine ပါရှိသည်။ သို့သော်သူတို့သည်တူညီသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမဟုတ်ပါ။ Claritin-D တွင်လှုံ့ဆော်သူလည်းပါ ၀ င်သည် decongestant pseudoephedrine တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Claritin-D သည်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ပိုကောင်းသလား။
သင်တွေ့ကြုံသောဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သင်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်အကှေ့ဖိအားကိုခံစားရပါက Claritin-D သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပျော့ပျောင်းသောဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါက Claritin သည်ဓာတ်မတည့်မှုသက်သာစေရန်အတွက်လည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ကိုသုံးလို့ရမလား။
Claritin နှင့် Claritin-D ကိုသာအသုံးပြုသင့်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အကျိုးကျေးဇူးများကိုအန္တရာယ်များထက်သာလွန်လျှင်။ Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ကိုမသုံးမီဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ငါအရက်နှင့်အတူ Claritin သို့မဟုတ် Claritin-D ကိုသုံးနိုင်သလား?
ဟုတ်တယ် ယေဘုယျအားဖြင့်အကြံပြုသည်မဟုတ် Claritin ထုတ်ကုန်ယူနေစဉ်အရက်ကိုသောက်ရန်။ အရက်နှင့် Claritin ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အိပ်ငိုက်ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုမိုများပြားစေနိုင်သည်။
ငိုက်တာသည် Claritin-D ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောလူများအနေဖြင့်၎င်းသည်အိပ်မပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Claritin-D မှာ pseudoephedrine ပါ ၀ င်ပြီးလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အာရုံကြောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု pseudoephedrine ၏လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုကြောင့် Claritin နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ပြင်းထန်သောမူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်မငြိမ်မသက်ခြင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
ဟုတ်တယ်။ Claritin သည်ချွဲခန်းခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Claritin ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းသည် Claritin နှင့်အခြား antihistamine ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အစာစားပြီး ၂ နာရီအကြာ၌သွေးချို ၁၁၀